အစ္စရေးလူတွေကအတူတကွလမ်းလျှောက်ပြီးအတူတကွလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြတယ် - RayHaber
Homeတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ35 Izmirအတူတူအတူတူလမ်းလျှောက်ပါ, သူတို့ကİzmirlilerနင်း Translate ရှိ
22 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 35 Izmir, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, တူရကီ 0
ပို့ကုန်ခြေနင်း ErdUlAr တလျှောက်အတူတူလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြ
Gundogdu ရင်ပြင်ကနေ Alsancak ဘူတာအဝင်ဝရန် "အတူတူလမ်းလျှောက်ဖို့" ဟုအဆိုပါİzmirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, ကျင်းပနေတစ်ချိန်တည်းဥရောပ Mobility ကိုအပတ် (16-22 စက်တင်ဘာလ) မှာအတော်များများနေထိုင်သူများလမ်းလျှောက်လှုပ်ရှားမှု၏ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ Alsancak Bornova လမ်း (1469 လမ်း) ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူလက်မောင်းအတွက်လက်မောင်းချီတက်ဖို့မသန်စွမ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ကအသွားအလာမှအပိတ်ခံခဲ့ရသည်။
16-22 စက်တင်ဘာလအကြား Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, "Mobility ကိုအပတ်" ဖုံးလွှမ်းယနေ့ (21 စက်တင်ဘာလ) အွန်၏လူများ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးလမ်းလျှောက်ဖြစ်ရပ်စည်းရုံး။ Bornova လမ်းအတွက်လက်မောင်း Gundogdu ရင်ပြင်မှာİzmirlilerလက်မောင်းအောင်မြင်ပြီးသူအခမဲ့ Hugin အဆိုပါ Alsancak ဘူတာဝင်ပေါက်ဂီတအထိလမ်းလျှောက် Animation ထံမှခိုးယူဖြစ်ရပ်ဂစ်တာ။ Izmir မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဌာနဒုတိယအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အာဘော်တိုက်ခိုက်မှုများ, ဥရောပသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေ Tibor Sztaricska Walking, လမ်းသွားလမ်းလာများနှင့် bicyclists အစည်းအရုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသင်း (BİSUD) ကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ခဲ့သည်။
စာရေးသူတိုက်ခိုက်မှုများ Walking ၏အဆုံးမှာအမှာစကားပြောကြား "ဤရက်သတ္တပတ်လူသွားလူအသွားအလာ၏အရေးပါမှုကိုအလေးပေးဖို့, တစ်ဦးဆိုင်ကယ်စီးနင်း, မြို့ထဲတွင်အထူးကြပ်မတ်ကားတစ်စီးအသုံးပြုမှုအတွက်ပေါ်ထွက်လာသောအဓိကပြဿနာများမှအခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအာရုံကိုဆွဲရန်ရည်မှန်း," ဟု၎င်းကပြောသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂ Sztaricska ၏ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က "Mobility ကိုအပတ်ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကနှင့်ပြည်ထောင်စု၏ကန့်သတ်ထက်ကျော်လွန်ထောက်ခံထားတဲ့ပဏာမခြေလှမ်းခဲ့ TYPE ။ ကျနော်တို့မှီအောင်လိုက်ဆက်လက်လိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။
21 İnciraltıအုပ်စုများစက်တင်ဘာလတီထွင်မှုအတွက်မြို့ပြသစ်တောများ၏လှုပ်ရှားမှုများ၏နယ်ပယ်အတွင်း၌လည်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦဓာတ်ငွေ့တစ်ဦးစက်ဘီးကိုစီးခဲ့သည် cyclists ။ အဆိုပါပြင်းထန်သောပါဝင်မှုကဆောင်ရွက်လှုပ်ရှားမှုများကို၏စက်ဘီးအုပ်စုများနှင့်နိုင်ငံသားများ, Izmir မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဌာနဒုတိယအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အာဘော်တိုက်ခိုက်မှုများ, ဥရောပသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေ Tibor Sztaricska, အစ္စတန်ဘူလ်ဒတျချြကောင်စစ်ဝန်အထွေထွေ Bart ဗန် Bolhuis နှင့် Marjolein ဗန်တွင်းဒတျချြစက်ဘီးသံရုံးကိုလည်း Nadort ရှိခဲ့ပါတယ်။
တိုက်ခိုက်မှုများ၏ထိရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်အတွက်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းအဆောက်အဦ, "16-22 စက်တင်ဘာလဥရောပ Mobility ကိုအပတ်အဖြစ်ဂုဏ်ပြုဖြစ်ပါတယ်။ Izmir ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဦးဆောင်မြို့ကြီးများ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ ကျနော်တို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပိုပြီးဖြစ်ရပ်များလုပ်နေလုပ်နေကြောင့် ပို. ပင်လာမည့်နှစ်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရောက်ရှိဖို့ပြဿနာတစ်ခုအဖြစ်မမြင်မိပါဘူး။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကျွန်တော်တစ်ဦးမြို့ချင်တယ်ဘယ်လိုမေးခွန်းရဲ့အဖြေဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရည်မှန်းချက်အဖြစ်လူတွေကြည့်ဖို့ပျော်ရွှင်နေကြတယ် "ဟုသူကပြောသည်။ အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ဆိုင်ကယ် Bart ဗန် Bolhuis အတွက်ဒတ်ခ်ျကောင်စစ်ဝန်ကြောင်းကိုညွှန်ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ "သင်နှင့်အတူငါ၏အစက်ဘီးစီး၏ဂုဏ်အသရေဘို့," ဟု၎င်းကပြောသည်။
ဓာတ်ငွေ့အဆောက်အဦးအတွက်လှုပ်ရှားမှုများ, စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသင်းမှရဲ့တင်ပြချက်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်gösterimiyle.soတွေ့ရှိခဲ့တစ်ဦးဆိုင်ကယ် (အဘယ်ကြောင့်စစ်ပွဲ Cycle) ရက်နေ့တွင်ရတဲ့နေကြသည်။
သူတို့ကအမြိုးသမီးမြား၏ဘေးကင်းလုံခြုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်နင်းလှည့် 10 / 03 / 2015 သူတို့ကအမြိုးသမီးမြား၏ဘေးကင်းလုံခြုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်နင်းလှည့်: အစ္စတန်ဘူလ်တက္ကသိုလ်စက်ဘီးကလပ်ကျောင်းသားများကို: ဥရောပဘက်ခြမ်းဖို့ Anatolian ခြမ်းကတော့နင်းလှည့် "ကျနော်တို့၏ဘေးကင်းလုံခြုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆောင်ပုဒ်အမျိုးသမီး၏ညာဘက်ချင်" ။ အစ္စတန်ဘူလ်တက္ကသိုလ်စက်ဘီးကလပ်ကျောင်းသားများ, အလုပ်အဖွဲ့အမျိုးသမီးကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လ 8 အာရှဘက်ရဲ့နေ့ဖို့ဥရောပဘက်ခြမ်းကနေ pedaled သူတို့ရဲ့စက်ဘီးကတဆင့်အသိအမြင်ကိုဖန်တီးရန် "ကျနော်တို့ကဘေးကင်းလုံခြုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှအမြိုးသမီးမြား၏ညာဘက်ချင်" ။ "ကျနော်တို့ကဘေးကင်းလုံခြုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှအမြိုးသမီးမြား၏ညာဘက်ချင်" Lutfi Kirdar ပြပွဲနှင့်ကျောင်းသားများဆိုင်ကယ်စီးနင်းသည့် Bosphorus တံတား၏ Anatolian ခြမ်းမှထွက် သွား. ရှိရာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာများ၏ရှေ့မှောက်၌စည်းဝေးကြ၏။ Mersin Aslan CV ကို၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာလုပ်ကြံခံရဆန္ဒပြခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုရှည်ဖို့ pedaled မှ ...
သူတို့ကယာဉ်အသွားအလာအတွက် bicyclists ဖို့အာရုံကိုဆွဲရန်နင်းလှည့် 12 / 05 / 2014 သူတို့ကစက်ဘီးစီးအသွားအလာအတွက်စက်ဘီးစီးဖို့အာရုံကိုဆွဲရန် pedaled 250 အဝေးပြေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ယာဉ်အသွားအလာအပတ်လှုပ်ရှားမှုများများ၏နယ်ပယ်အတွင်းအသွားအလာအတွက် bicyclists ဖို့အာရုံကိုဆွဲရန်နင်းလှည့်။ Sakarya ဝန်, မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနှင့်အချို့သောအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထား "ကျနော်တို့ကဗန် Den ယာဉ်အသွားအလာများမှာ" ဟုအဆိုပါဖြစ်ရပ်ကိုတက်ရောက်ခဲ့သူ 250 စက်ဘီးဝါသနာအိုး, မြို့စတုရန်းအတွက်သိမ်းယူကြ၏။ သူတို့ရဲ့စက်ဘီးပေါ်ယာဉ်တန်းဖွဲ့စည်းအားကစားသမားများ, ခြေနင်းလုံခြုံမောင်းနှင်မှု၏အရေးပါမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအသိပညာပေးဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်ယာဉ်အသွားအလာပန်းခြံ Serdivan ခရိုင်မှာဖွင့်လှည့်။ အစည်းအဝေး၏အဆုံးမှာလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်သင်တန်းသားများကို 10 ကလူဆိုင်ကယ်အကြားတစ်ဦးကိုမဲနှိုက်ကျင်းပခဲ့တယ်။ လက်ထောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Hikmet Dinç, AA ကိုသတင်းထောက်တွေကိုကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်, ထိုဖြစ်ရပ်အတွက်ပြင်းထန်သောပါဝင်မှုကဆိုသည်။ အဆိုပါ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ...
သူတို့ကနင်းကင်ဆာဆန့်ကျင် Translate 07 / 04 / 2019 Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်လူငယ်န်ဆောင်မှုများနှင့်အားကစားဆိုင်ရာဌာန, ကျောင်းသားများနှင့်ကင်ဆာစက်ဘီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိအမြင်ဖန်တီး Izmit အတွက်အသိပညာတိုးပွားစေဖို့စတေနာ့ဝနျထမျးမြားနှငျ့ pedaled ။ 15 မြို့လုံးကျော်ခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်စမှအဆုံးအမျိုးသား Will အတွက်ဇူလိုင်လစက်ဘီးချီတက်ပွဲစတုရန်းစတင်။ သတိထားပါ, စက်ဘီးနှောင်းပိုင်းတွင်အမျိုးသားစေတနာ့ဝန်ထမ်း, အရင်ပြင်၌စုရုံးလိမ့်မည် 'သတိထားပါ, မစိုးရိမ်နှောင်းပိုင်း "နဖူးစည်းစာတမ်းဖွင့်လှစ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ထိုအဖြစ်အပျက်၏ဆောင်ပုဒ်ကင်ဆာနှင့်ကင်ဆာလူနာကဒီဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူမှတ်ချက်ချခဲ့သည်အပြင်းအထန်ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ကနှင်းလျှောစီး slope ဖို့မြို့ပြသစ်တော Translate 20 / 02 / 2015 အဆိုပါနှင်းလျှောတောင်စောင်းမှသူတို့ကမြို့ပြသစ်တော Translate: Kocaeli အတွက်အင်္ဂါနေ့ကနေထိရောက်သောဖြစ်သည့်နှင်းခြင်း, နှင်းလျှောစီးတောင်စောင်းနီးစပ်သူတမြို့လယ်မှာမြို့ပြသစ်တောဟာလမျးလြှောကျသှားခွငျးဧရိယာသို့ပြန်လာစေ၏။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့မိသားစုများအခွင့်အလမ်းစွတ်ဖါးဆီးနှင်းအားလပ်ရက်အမိအရဆုပ်ကိုင်သူတို့သားသမီးယူပြီးနှင့်အတူမြို့ပြတောတွင်းမှပြေး၏။ Kocaeli ခုနှစ်တွင်တူရကီမိုးသည်းထန်စွာနှင်းနှင့်အတူ 1 မီတာသို့ရောက်ရှိဆီးနှင်းနှင့်အတူနိုင်ငံသားများ၏သစ်တောအပန်းဖြေဧရိယာ၌ Izmit ခရိုင် UMUTTEPE မြို့အတွက်အနည်းငယ်နှင်းလျှောစီးတောင်စောင်းတစ်ဦးအနေနဲ့အခြားရွေးချယ်စရာနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းဖြစ်လာခဲ့ပါသည်သိရသည်။ မြို့ပြသစ်တောအတွက်ကျောင်းအားလပ်ရက်မိသားစုများဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရယူသူတို့ရဲ့သားတို့သည်မိမိတို့စွတ်ဖါးနှင်းလျှောစီးတောင်စောင်းကိုယူပြီးနှင့်အတူစကားပြောဆိုရန်မိမိတို့လက်ကိုလှည့်ပါပြီ။ လမ်း ...
လန်ဒန်မြေအောက်ဒစ္စကိုလူငယ်ကွင်းဆင်း Translate 14 / 04 / 2017 လူငယ်တို့က Metro ကွင်းဆင်းလန်ဒန်မြို့ရှိဒစ္စကို Translate: ဒစ္စကိုအလင်းရောင်နှင့်လူငယ်များဖျော်ဖြေရေးအဆုံးသတ်ထားရန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအဘို့အသံကိုစနစ်များနှင့်အတူဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့ Bakerloo မြေအောက်လိုင်းတခုတခုအပေါ်မှာအသုံးမပြုတဲ့မြေအောက်ရထား tool ကိုဘာသာပြန်ဆိုဖို့ဗြိတိန်မြို့တော်။ နောက်ဆုံးပေါ်ရဲတပ်ဖွဲ့လူငယ်ဖျော်ဖြေရေးပေးတဲ့သူတစ်ဦးအသုံးမပြုတဲ့မြေအောက်ရထားလိုင်းကိုအလင်းရောင်နဲ့အသံစနစ်များအတွက်မော်တော်ယာဉ်သို့ Bakerloo ပြွန်။ ထိုအဖြစ်အပျက်ကနေလက်ခံရရှိသတင်းအချက်အလက်များအရ, ဧပြီ 10 ဗြိတိသျှမြို့တော်လန်ဒန်ရဲ့မြေအောက်ရထားလိုင်းများနေရာယူခဲ့ပါတယ်။ လန်ဒန်ရဲတပ်ဖွဲ့သူတို့လူမှုမီဒီယာအကောင့်များမှဖျော်ဖြေရေးရပ်တန့်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ လန်ဒန်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်, မြေအောက်ရထားညဥ့်ဖျော်ဖြေရေးပေါ်တွင်ပညတ်တရား၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ "လို့မက်ထရိုလိုင်းသုံးပြီးရှောင်ရှားကျနော်တို့ညဥ့်ကလပ်အတွက် DJ သမားကိုမေး" အဲဒီဖော်ပြထားနှင့် ...
သူတို့ကနှင်းလျှောစီး slope ဖို့မြို့ပြသစ်တော Translate
İzmirlilerအဆိုပါ Atakent İnciraltıİZKARAYစီမံကိန်းများအတွက်ရွေးချယ်
Karşıyaka လမ်းရထားစီမံကိန်းအား Izmirliyan အားဖြင့်လူသိများခဲ့သည်